Vadzidzi Vanomwe Vanobatwa neCovid-19 paChikoro chePrince Edward muHarare
Vamwe vabereki vanonzi vatanga kubvisa vana vavo pane chimwe chikoro muHarare mushure mekunge vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vawanikwa vaine chirwere cheCovid-19.
Gwaro raburitswa nemukuru wechikoro chePrince Edward High School chiri muHarare, Va A.G. Gora, rinoti mushure mekuongororesa vadzidzi vepachikoro chavo nezuro, vana vanomwe vawanikwa vaine chirwere cheCovid 19 uye havasati vawana zvakabuda mukuongororwa kwevamwe kunyange hazvo vadzidzi vese vakaongororwa.
VaGora vati vadzidzi vawanikwa vaine chirwere ichi vapatsanurwa kune vamwe vana uye vamirira kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro pedambudziko ravasangana naro iri.
Mumwe mubereki ane vana vanodzidza pachikoro ichi, Amai Revai Gambe, vati vaona zvakakodzera kuti vambobvisa vana vavo pachikoro kudzamara hurumende yatora matanho akasimba ekuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCovid 19.
Mumwe mubereki ane mwana anodzidza pachikoro apa abvisawo mwana wake pachikoro apa nhasi, uyo aramba kudomwa nezita, akurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yedzidzo sezvo vana vakatora nguva yakareba vasingaende kuzvikoro zvichitevera kuvharwa kwakanga kwakaitwa nyika yose nekuda kwedenda reCovid 19.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi redzidzo, VaTaungana Ndoro, vaudza Studio 7 kuti bazi ravo harisati rave nedanho raratora panyaya iyi vachiti vachatevedzera zvinenge zvabva kubva kubazi rehutano.
Mutevedzeri wegurukota rezvehutano, VaJohn Mangwiro, vati bazi ravo ratumira vanhu kunoongorora mamiriro akaita zvinhu pachikoro apa kuitira kuti vagoona kuti votora matanho api.
Pasvika Studio 7 pachikoro chePrince Edward vezvehutano vanga vachifirita chikoro chose.
Zvichakadai, vamwe vedzisvondo vari pasi peZimbabwe Catholic Bishops Conference vabaiwa nhomba yeSinopharm pahurongwa hwanga huchitungamirwa nebazi rezvehutano vamwe vafundisi vachikurudzira kuti vose vanoita zvechitendero vabaiwe nhomba iyi kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCovid19.
Vabaiwa nhomba ava vafundisi mazana maviri nemakumi masere nevasere.
Vanhu vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro vakasvika zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, 5 269, kusanganisira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
Bazi rezvehutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutamba vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana nemazana mana nevana (49 404) uye vabaiwa nhomba yechipiri vave zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe (2489).
Bazi rezvehutano rinoti kubva pakatanga chirwere ichi, muZimbabwe mave nevanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe (36 749) vakabatwa vaine chirwere ichi, uye vakapora vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu (34476).
Munyika mave nevanhu chiuru nemazana mashanu negumi nevatanhatu, 1 516, vafa nechirwere cheCovid 19 uye huwandu uhwu hunogona kukwira pachaburitswa mamwe mashoko nebazi iri nhasi manheru.